Sida Looga takhaluso Duqsiga Dibedda Tallaabo Tallaabo
Waqtiga boostada: 08-12-2020
go'aamiso halka duqsigu ku nool yahay iyo taranka - iyo sida ay ku soo galayaan guriga. Marka tan la ogaado, fayadhowrka, ka-reebitaanka, iyo koontaroolka makaanikada ama kiimikada ayaa gacan ka geysan doona in laga ilaaliyo. Kormeerka Duullimaadka Guriga Si loo ogaado meesha duqsigu ku nool yahay oo ku tarmayo, a ...Akhri wax dheeraad ah »
Jooji Gurigaaga Gurigaaga
Jiirarka qaarkood waxay sameyn karaan xayawaanno xayawaan ah oo qurux badan, laakiin jiirka guriga ayaan ka mid ahayn kuwaas. Oo markii jiirku ku soo baxo gurigaaga iyada oo loo marayo dildilaaca ama farqiga ama cirridka darbiga qallalan, sanduuqyada la keydiyay, iyo waraaqaha, ama xitaa fiilooyinka si loo sameeyo buulkeeda - intaad kaadido oo aad saxarooto marka ay safreyso, i ...Akhri wax dheeraad ah »
Xagee Dhigaa Dabinada Jiirka iyo 11 Su’aal iyo Jawaabo Jiir
Sidee jiirku guriga u soo galaan? Sidee ku ogaan kartaa inaad jiir leedahay? Maxay jiirku dhibaato u yihiin? Jiirka Norway iyo Jiirka Dooliga waa labada jiir ee ugu badan ee guryaha ku soo duula oo aad u burburin kara Waxyaabaha soo socda ayaa ah qaar ka mid ah su'aalaha ugu caansan ee ku saabsan xayawaanadan jiirka ah ...Akhri wax dheeraad ah »
Farqiga u dhexeeya Jiirka iyo Jiirka
Marka laga soo tago xaqiiqda ah in jiirka iyo jiirku ay u muuqdaan kuwo ka duwan, iyagu waa wax yar uun kala duwanaanshaha kale ee u dhexeeya. Waa muhiim in la ogaado kala duwanaanshahan maxaa yeelay dadaalkaaga xakamaynta jiirka ayaa noqon doona kan ugu guuleysta markaad fahanto mid kasta oo ka mid ah cayayaankaas, habdhaqankooda, cuntada ...Akhri wax dheeraad ah »
7 Calaamadood oo caan ah oo ah inaad wali jiir ama jiir ku hayso gurigaaga
Waxaad dhibaato ku qabay jiir ama jiir gurigaaga, laakiin waxaad u maleyneysaa inaad adiga - ama xirfadlaha maareynta cayayaanka ee aad u yeertay - aad ka takhalustay dhammaan jiirka. Laakiin sidee ku ogaan kartaa hubaal? Saxaradaas aad ka heshay golaha wasiirada hoostooda ma kuwo hore baa mise waa kuwo cusub? Miyuu taas kuu xanjoonaysaa ...Akhri wax dheeraad ah »
Ku soo dhawow booqashada kooxda Pelsis
Seddex maamule wax soo saar xirfadle ah ayaa cashar fiican naga siinaya hagaajinta alaabtayada. Isla mar ahaantaana, waxay halkan keenaan qaar ka mid ah alaabooyin cusub oo naqshadeynta wax soo saarka ah.Waxaan isku dayi doonnaa sida ugu fiican ee aan ugu soo bandhigi karno waxyaabaha ku qanacsan mustaqbalka dhow! Akhri wax dheeraad ah »
Cangzhou Jinglong Technology Co.,. Waxaan saldhig u ahay maalgashiga 20 millio ...Akhri wax dheeraad ah »
CANGZHOU JINGLONG Farsamada CO,. LTD.